Uzime useqwashisa abasha ngezinkinga ezahlukene
UNKSZ Nokukhanya Shandu owuMiss Gauteng Exclusive uqwashisa ngesifo sokuphazamiseka komqondo
PHILI MJOLI | November 1, 2018
UKUFEYILA enyuvesi okokuqala empilweni yakhe kuholele ekutheni abe nengcindezi ephazamise ukusebenza kahle kwengqondo yakhe kodwa engaboni.
UNksz Nokukhanya Shandu (23) waseGingindlovu owenza unyaka wokugcina ezifundweni zobuthisha enyuvesi iWitswatersrand, uthe ukufeyila ezinye izifundo ngesikhathi enza unyaka wokuqala kwamenza ukuthi ahlaselwe yisifo sokuphazamiseka kwengqondo ngoba wayecabanga kakhulu.
Uthe wayehluleka ukumelana nengcindezi yokuthi kunezifundo azifeyilile ekubeni kubo belindele ukuthi aphase kahle bese ethola umsebenzi ukuze abakhulule enhluphekweni.
“Ekhaya bahlale bebala ukuthi ngizoqeda nini, bengihluleka ukubatshela ukuthi ngeke ngiqede ngaleso sikhathi ngoba kukhona izifundo engingaziphasanga. Bengicabanga ukuthi bazongibuza ukuthi yini eyenze ukuthi ngihlulwe ukufunda ngoba yikona engakuphumela ekhaya. Bengaqondi ukuthi ukuqala impilo entsha kunengcindezi. Ngangizibona ngiyisehluleki, ngenhlanhla uthisha wami wakhuluma ngezifo zokuphazamiseka komqondo ekilasini. Kulapho ngabona khona ukuthi ngiyagula futhi ngidinga usizo ukuze ngikwazi ukuqhubeka nezifundo zami kahle,” kusho yena.
Uthe ngemuva kokuthola usizo wafunda ngezifo eziningi ezihambisana nokuphazamiseka komqondo, waqonda ukuthi indlela abantu abayibuka ngazo indaba yokuphazamiseka emqondweni yenza ukuthi lezi zifo zingasukunyelwa.
“Emiphakathini yethu kuba lula nje ukuthi kuthiwe umuntu uyahlanya kungabe kusacutshungulwa ukuthi unasiphi isifo futhi angasizakala kanjani,” kusho uNksz Shandu.
Eseluleme uthe waba nogqozi lokuqwashisa, ukusabalalisa nokufundisa ngesifo sokuphazamiseka komqondo. Nyakenye ungenele umncintiswano womuntu omusha ofisa ukwenza umehluko emphakathini, uMiss Gauteng Exclusive, aphethe isicoco sawo njengamanje.
Umsebenzi wakhe ukuqwashisa nokufundisa abantu abasha ngezinkinga ezihlasela bona.
Uthe uma uphethe lesi sicoco uyazikhethela ukuthi ufuna ukugxila kuphi, yena ugxile ekufundiseni ngezifo ezihambisana nophazamiseka kwengqondo nangendlela abantu abaziphatha ngayo uma benalezi zifo. Ulwazi oluhambisana nezithombe ezifundisa ngalezi zifo, ulusabalalisa ezinkundleni zokuxhumana.
UNksz Shandu uthe uzophuma kulesi sikhundla ngenyanga ezayo. Uthe ubefisa ukuthi kuthi kuphela isikhathi sakhe abe esenehlangano yakhe eqwashisa ngezifo zokuphazamiseka komqondo, kodwa akakwazanga ngoba imigomo yokuvula inhlangano ibalula ukuthi kumele abe nabanye abantu asebebenza nabo ubengakabaqoki.
“Okunye ebengikufisa ukuvula inkampani yami ukuze ngikwazi ukuhamba emiphakathini ngenza izinkulumo ezakhayo. Senginayo inkampani kodwa ngisacija ikhono lokukhuluma phambi kwabantu,” kusho yena